Isivivinyo Samahhala seDisney Plus (2020) - Sebenzisa ukusakazwa kwezinsuku eziyi-7 - Izipesheli
Ngabe ufuna iDisney kanye nesivivinyo samahhala? Ufuna ukuzama imibukiso ngaphambi kokuthola okubhaliselwe? Sikutholile. Ngesiqondisi sethu sesinyathelo ngesinyathelo, ungafuna kalula iDisney kanye nesilingo samahhala.Kusukela kwahlasela lolu bhubhane, ukusakaza kube ngenye yezinto ezithandwa kakhulu ukwenzelwa noma ngubani. Abantu abaningi baqale ukuluthwa yimboni yezikaqedisizungu, futhi nesidingo samapulatifomu amaningi okusakaza sikhuphukile.
IDisney plus ibilokhu inikela ngezilingo ezinkulu zamahhala kubasebenzisi abathanda ipulatifomu yokusakaza nemibukiso yabo. Kube khona ukungabaza okukhulu phakathi kwabasebenzisi emhlabeni wonke ukuthi bangayithola kanjani i-Disney plus trial.
I-Disney Plus Inikeza Isivivinyo Samahhala sezinsuku ezingu-7:
Sonke sithanda izivivinyo zamahhala, akunjalo? IDisney plus inikeza izivivinyo zamahhala ezingavamile kubasebenzisi bayo; noma kunjalo, bama okufanayo kusuka ngoJuni 2020. Kepha akudingeki ukhathazeke, futhi sinokunye okuhle kakhulu ongakuthola.
Ngosizo lwethu, ungazama ngokushesha isivivinyo sabo samahhala sezinsuku eziyisikhombisa. Siqhamuke nomhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ukukusiza ufune i-Disney enhle kakhulu nesivivinyo samahhala.
Isilingo Samahhala seNetflix
Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30
Izinyathelo Zokuthola Isivivinyo Samahhala seDisney Plus:
Ukufuna isivivinyo samahhala seDisney Plus kulula kakhulu ngesiqondisi sethu sesinyathelo ngesinyathelo.
Isinyathelo 1: Vakashela Iwebhusayithi Esemthethweni
Chofoza kusixhumanisi sethu.Ngesixhumanisi sethu, uzoqondiswa kabusha uye kwiwebhusayithi esemthethweni yeDisney Plus. Chofoza lapha ukucela iDisney Plus. Ngemuva kwalokho ungahlola isiza ukubona imibukiso ehlukahlukene ozoyibuka nge-Disney Plus Subscription eyingqayizivele. Thatha okubhaliselwe kweDisney okubiza u- $ 13, okubandakanya i-ESPN plus neHulu.
Isinyathelo 2:Qedela ukukhokha
Faka imininingwane yekhadi lakho bese ukhokha ngokuphelele ukuze ujabulele uhlelo lwesonto.
Ukukhanselwa kulula kunakho konke. Ukuze ufune isilingo samahhala, ngaphandle kokukhokha indibilishi eyodwa, qiniseka ukuthi ukhansela okubhaliselwe ngaphambi kokuphela kwesivivinyo sezinsuku ezingu-7.Ngena ngemvume kusuka ku-akhawunti yakho bese uya emininingwaneni yokukhokha bese uchofoza ukukhansela okubhaliselwe; ukubuyiselwa kwakho imali kungekudala kuzofakwa ku-akhawunti yakho ngaleso sikhathi.
Ngakho-ke nansi indlela ongasifuna kalula ngayo isilingo samahhala seDisney Plus.
Yini Ongayibuka ngesilingo samahhala seDisney Plus?
Izilingo zamahhala ziyamangalisa, ezokuheha ababhalisile, futhi izivivinyo zamahhala zikunikeza ukufinyelela okuphelele kunoma yini enikezwa yipulatifomu.Ngesilingo samahhala seDisney, ungabuka noma yini oyithandayo, kusukela kuMarvel kuya ku-Star Wars naku-Disney ne-Pstrong's. Kuyiphakethe elilodwa lakho.
Sitholaphi Isilingo Samahhala seDisney Plus?
Into eyodwa okufanele uyazi ngesilingo samahhala seDisney ukuthi iqondene nesifunda esithile. Ngeke uthole isilingo se-Disney plus emazweni lapho i-Disney plus yethulwe khona futhi yaba khona iminyaka. Emazweni afana ne-U.K ne-USA, lapho ipulatifomu isungulwe kahle, isivivinyo samahhala ngeke sitholakale, kanti amazwe afana neJapan, lapho iDisney plus isanda kwethulwa khona, anikela ngezilingo zamahhala kubasebenzisi abangafika inyanga eyodwa.
Ngubani Ongafuna I-Disney Plus Mahhala?
Amapulatifomu amaningi asebenzisana neDisney Plus ukunikela ngamasevisi nezinsizakalo ezinhle kakhulu ngenani elincishisiwe labasebenzisi. Sishilo okumbalwa okungezansi kwakho.
1. Amakhasimende we-Verizon angenantambo ne-inthanethi
I-Verizon Wireless inikeza izindlela eziningi lapho abasebenzisi bayo bangafuna i-Disney Plus yamahhala. Uma ukhetha uhlelo lwabo olungenamkhawulo noma wenza uhlelo olungenamkhawulo, ungathola i-Disney Plus Free izinyanga eziyisithupha.
Futhi banokudlala uhlelo olungenamkhawulo futhi bathola uhlelo olungenamkhawulo, olunikeza ukufinyelela kwamahhala kwiDisney Plus ne-Espn Plus neHulu futhi. Lokhu kuyinto yempilo yonke, futhi akukho ukuphela kwayo.
Insizakalo engenantambo yase-U.S. Inikezela amakhasimende ayo imigqa ephelele nge-akhawunti ngayinye; uthola iDisney Plus eneHulu ne-Espn kanye nenqwaba ebiza cishe u- $ 13 mahhala.Kudinga ukuthi ube nolayini abathathu abaphelele be-akhawunti yakho, bese ungazikhethela wena phakathi kwezinsizakalo ezahlukahlukene abazisakazayo.
3. Abathengi be-Chromebook
Ubuwazi ukuthi abathengi abasha be-Chromebook bangafuna izinyanga ezintathu ze-Disney Plus yamahhala?Ngenkathi usetha i-Chromebook yakho, iya ekhasini lewebhu le-Chromebook Offers bese uthola ikhodi yephromoshini yeDisney Plus.
Bese ulanda i-Disney plus esitolo sokudlala, faka ikhodi yakho yokuphromotha, bese uqala ngezinyanga ezintathu ze-Disney Plus yamahhala.
4. Abasebenzi beDisney Park bathola i-Disney Plus yamahhala
Uma ungumsebenzi weDisney park osebenza kunoma yimaphi amapaki weDisney afana neDisneyland noma iDisneyworld, ungafaka isicelo sokubhaliselwe samahhala seDisney Plus.
Kodwa-ke, abasebenzi kuzofanele bakhethe phakathi kwamapasi esango leDisney park emindeni yabo noma iDisney plus Subscription.
5. Ukunikezwa kwelungu leDelta SkyMiles
Kusebenza kuphela kumalungu amasha, amalungu e-Delta Skymiles okwamanje angenayo i-Disney Plus angathola ukuqulwa kwamasonto amabili esikhundleni sesivivinyo seviki elilodwa esitholakala kubo bonke.
Kufanele uye kuwebhusayithi esemthethweni yeDisney Plus bese ufaka ikhodi yesivivinyo. Ungathola futhi ukubukwa kwezindiza kweDisney Plus emizileni ethile.
1Q. Ngabe iDisney Plus inikela ngesilingo samahhala?
Iminyaka:IDisney plus inikela ngesivivinyo samahhala emazweni kuphela lapho isanda kwethulwa khona njengeJapan, nakwamanye amazwe afana ne-U.S. Ne-UK, ungaya esivivinyweni samahhala sezinsuku eziyisikhombisa kumhlahlandlela wethu.
2Q. Yimiphi imibukiso ongayibuka ngesivivinyo samahhala seDisney Plus?
Iminyaka:Izilingo zamahhala zeDisney Plus zikuvumela ukuthi ubuke yonke imibukiso epulatifomu yabo inqobo nje uma unezilingo zamahhala.
3Q. Ibiza malini iDisney Plus?
Iminyaka:Inhlanganisela yeDisney plus, i-ESPN plus, neHulu izokubiza u- $ 12.99 kuphela ngenyanga.
I-Disney Plus iyipulatifomu enhle kakhulu yokuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokusakaza. Banemibukiso emikhulu yabasebenzisi babo ngentengo emnandi. Ungahlola isivivinyo sabo samahhala, esikusiza ukuthi uhlole ukuthi yimiphi imibukiso etholakalayo kungxenyekazi yabo.Ungangena kwimibukiso ephezulu kuDisney futhi uthole ukufinyelela kwimibukiso yakho yezemidlalo oyithandayo ku-ESPN plus, neminye imibukiso emnandi kuHulu.
Thola Amakhadi Ezipho wamahhala we-Amazon
I-Deceive Inc - Ikhishwa Ngasekuqaleni kuka-2023!
Ngabe i-KUWTK ayikahambi? Isizini 19 ye-Keep Up with the Kardashians: Umhlahlandlela Wensiza